Qisada Heesta ‘Guuleed Ma Joogaa’ Iyo Xog-warranka Dhabta Ah Ee Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam –Q:2aad | FooreNews
Home Barnaamijo Qisada Heesta ‘Guuleed Ma Joogaa’ Iyo Xog-warranka Dhabta Ah Ee Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam –Q:2aad
Qisada Heesta ‘Guuleed Ma Joogaa’ Iyo Xog-warranka Dhabta Ah Ee Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam –Q:2aad
FoorenewsApr 05, 2018Barnaamijo, Sheekooyin, Suugaan, wararka0
Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam Ilaahay ha u naxariistee waxa uu si faahfaahsan innoogu warramayaa qaabkii ay heestani ugu dhalatay in uu sameeyo waxaana heesta dhadhankeeda kor u sii qaadaya macnaha ka dambeeya ereyada uu ku cabbirayo qisada ay heestani ku dhalatay waxaanan qormadeena Isniinta ku daah furi doonaa Abwaan Yamyam oo innooga warrama gabi ahaanba sida qisadani ku dhalatay. Abwaan Yamyam oo arrinkaasi ka warramayaa waxa uu yidhi: “Heesta dadka badankoodu u yaqaano ‘Guuleed Ma Joogaa’ balse aan anigu ula baxay ‘Gobaad’ ee uu qaado ama ku luuqeeyo Fannaanka weyn ee Xasan Aadan Samatar waxa ay soo baxday sannadkii 1976-kii. Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho badhtankiisa ayay ku soo baxday. Qisadeedu waxa ay ahayd aniga oo wakhtigaa ahaa nin dhallinyaro ah ayaa waan iska soo qayilay kadib aniga oo meelahaa iska mar maraya goor fiidnimo ah ayaa waxaan soo ag maray oo aan arkay Deyr guri oo yar oo xaabo ka samaysan oo iska jilicsan oo aan qof sarajooggiisa qarin Karin. Waxa aan si kedis ah u arkay qof xaggiisa dambe ee gudaha guriga taagan oo aan markii hore is idhi ma geedbaa?. Illayn geed maahee gabadh timaha feedhanaysa ayaa meesha taagan. Markii aan u dareemay in ay qof tahay cidlona taagan tahay ayaa waxaan is idhi oo is waydiiyey sideed ula hadashaa?. Waan u soo dhawaaday. Dayrkii ayaan u soo dhawaaday oo aan caasha ku soo qabtay. Kadib waxaan la hadlay gabadhii oo wali halkii taagan oo timaha feedhanaysa waxaanan ku idhi: “Walaal” kadib waxa ay iigu jawaabtay: “Hee”. Anna waxaan u celiyey: “Walaal nin Guuleed La Yidhaa oo Askari ahi meelahan xaafadihiina ma degan yahay?”. Markaasay tidhi: “Yaa!!, Maxaad tidhi Guuleed ma galaaya, soo dhawaw bal oo wajigaaga I tus”. Wakhtigaasi aanu gabadha is hor taaganahay ee ay iyana dayrka xaggiisa gudaha ku jirto anna aan dibadda ka taaganahay waxa soo baxay oo nin jooggii soo mudh yidhi Dayaxa. Dayax aan wali dhammays tirnayn oo ku beegan xaggaya dambe ee qadaadkayga ama jeegadayda. Anigu markaa waxaan ka sii jeedaa dhinaca beri waxaanan u sii jeedaa wajahadda Galbeed oo gabadhu iga xigto. Gabadhii waxa ay tidhi wajigaaga in aan arko ayaan rabaa. Kadib waxaan hore u soo galay deyrkii yaraa ee oodda ka samaysnaa waxaanan u soo dhaafay gudaha dayrka. Waxaan isa soo taagay daaradda dayrka waxaanan arkay gabadhii oo dhex taagan Derin ama gogol fidsan kadib iyana way feedhanaysaa timaha. Waxaan ku idhi waa ikan ee I eeg. Si wanaagsan ayay ii eegtay oo wajiga iga buuxsatay. Waxay tidhi maxaad tidhi?. Anna waxaan ku idhi ninkaasi ayaan doonayay ee maalahan ma galaa balse ninkaasi maba jiro. Ninkan Guuleed wax jiraba maaha ee waxaan is idhi uun si uu hadalku noogu furmo markii aan doonay in aan gabadha la hadlo. Gabadhii waxa ay igu tidhi walaal ninku meeshan ma degana mana garanayo. Aniguna wajigaaga I tus waxaan kuu lahaa kadib heblaay ayay yidhi oo waxa ay u yeedhatay gabadh yar oo sagaal jir ah. Waxa ay tidhi aniga iyo gabadhaasi yar ee sagaal jirka ah oo guriga joogna ayaa niman noo yimaaddeen. Waxa ay ahaayeen laba nin oo halkan noogu soo galay. Way na war waraysteen. Hooyadiin xaggee jirtaa xaggan iyo xaggan kadib way naga tageen haddana isla habeenkiiba inta ay nagu soo gudeen ayay wax alla wixii aannu dhar iyo dahab haysanay naga qaateen oo guriga naga boobeen oo tuug bay ahaayeen. Markaa imika in aad adigu sidii oo kale tahay iyo in kale ayaan iska kaa hubsanayay. Waxaan ku idhi naa ma ihi anigu tuuge. Ilayn waxaan ku soo beegmay guri shil ku dhacay. Markaasaan si degdeg ah isku caddeeyey oo aan isu sheegay oo aan idhi ninkaasi sidaasa ayaan ahay ninka magacaasi leh ayaan ahay. Markaasi ayay yaabtay oo ay tidhi magacaasi waan garanayaa oo suugaantaada Dugsiyada ayaanu ku dhiganaaba. Soo fadhiiso ayay tidhi”.
Previous PostXildhibaanno Ka Tirsan Baarlamaanka UK Oo Soo Gaadhay Hargeysa Iyo Xukuumadda Oo Soo Bandhigtay Ujeedada Ay U Socdaan Next PostXog-Warran Ay Marxuumad Sahra Axmed Jaamac (IHU) Markii Ay Noolayd Ku Faahfaahisay Taariikh-nololeedkeeda Iyo Waayaheeda Faneed